Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Sida laga soo xigtay YouTube, 72 saacadood oo fiidiyo ah ayaa la dhejiyaa daqiiqad kasta! Isticmaalayaasha Twitter-ka waxay ku qoraan 400 milyan oo jeer maalintii. Adduun aad u buuq badan, way ku adag tahay wax soo saar, degel, ama adeeg in la maqlo. Way ka sii dhib badan tahay marka aysan jirin wax run ahaantii ka reeban waxa la suuqgeynayo. Maalin kasta, suuqleyda waxaa la soo gudboonaada caqabad ah inay kor uga kacaan sawaxanka. Aniga oo ku rajo weyn kicinta hal abuurka, waxaan u weecanayaa 2009